SHARBERIAN HUSKY DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Sharberian Husky Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Shar-Pei / Siberian Husky Dogs Noocyo Isku Daran
Inuki The Sharberian Husky hybrid sida eey qaangaar ah- Waxay jeceshahay inay salaaxdo, ku jiifsato qorraxda oo ay baaritaan ka sii wado socod dheer ''
Ninka loo yaqaan 'Sharberian Husky' ma ahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Shar-pei iyo Shiinaha Siberia Husky . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Inuki ee 'Sharberian Husky puppy mix puppy breppy' oo ah 2 bilood jir
Rocky the Husky Pei (Shar Pei / Siberian Husky mix) eey yar oo jirta 13 toddobaad jir— 'Rocky waa wax faro ku tiris ah, laakiin aad u caqli badan. Wuxuu jecel yahay inuu seexdo oo ciyaaro. Waxaan leenahay daarad aad u weyn, waxaanan filayaa haddii ay isaga ku xirnaan lahayd, inuu iska joogi lahaa dibadda. Fasalkiisii ​​ugu horreeyay ee tababarka ayaa soo socda waana hubaa inuu si dhakhso leh u qaban doono. Sida hadda, isagu waa gebi ahaanba suufka eeyaha loo tababaray , laakiin wuxuu kaloo isticmaalaa musqusha banaanka. Waa wax aad loola yaabo in uu waligiis 2 jeer shil ku galo rooga! Waxyaabaha uu jecel yahay inuu sameeyo waa inuu qubeysto! Wuxuu jecel yahay biyaha!
Rocky the Husky Pei (Shar Pei / Siberian Husky mix) eey yar oo jirta 13 toddobaad
“Tani waa Toby oo jira 2 bilood. Tani waa qiyaastii 3 maalmood ka dib markii aan ka helnay daryeelka korinta. Toby iyo walaalihiis ayaa maalin maalmaha ka mid ah laga dajiyay hoyga nin u sheegay inuusan daryeeli karin, wuxuu yiri ciyaalku waxay qiyaastii yihiin 4 toddobaad, hooyadiisna waxay ahayd Husky oo buuxa. Diyaar uma ahayn inuu aabihiis maleeshiyo, maxaa yeelay ardayda oo dhami waxay u muuqdeen kuwo aad u kala duwan, waxaana jiray hanti fara badan oo leh eeyo badan oo SO ah! Toby wuxuu ahaa qashinka qashinka, sidaas darteed wuxuu aaday daryeel korineed. Waxaan ka korsannay qiyaastii 10 toddobaad. Wuxuu ahaa nin macaan badan, wuxuu na xusuusiyey wax badan oo ka mid ah isku darkeenna 'Husky / Shepherd', wuxuuna ahaa mid qosol badan oo qosol badan. Waxa uu lahaa 'hadalka yar' ee qosolka badan, oo muuqaalka shaqsigu ku faraxsan yahay, nooca farxadda-nasiib wanaag ee shakhsiyadda, iyo markii dabadiisa la ruxruxo, jidhkiisa oo dhami wuu dhaqaaqaa! (Waxaan ugu yeeraa Squiggles markuu faraxsan yahay!) Waxaan aad u xiiseynaynay calaamadeyntiisa dhakhtarka xoolaha oo u maleynayay inuu qeyb ka ahaa Feeryahan? Ugu dambayntii waxaan u diray baadhitaan DNA ah iyada oo loo marayo Bio Pet Labs, iyaguna waxay dib u direen caddeyn leh 75% Siberian Husky iyo 20% Shar-Pei! Taasi waligeed xitaa maskaxdeenna ma dhaafin! Laakiin, hadda markaan ogaannay, waan aragnaa.
“Uma muuqdo inuu dan ka leeyahay xayawaannada kale ee ku hareeraysan. Aad buu daacad iigu yahay aniga markaan lugeynayo. Wuxuu samayn doonaa waxkasta oo daaweyn ah wuxuuna jecel yahay jacayl iyo amaan! Wuxuu umuuqdaa inuu yahay qof caqli badan wuxuu raaci karaa jihada hadii ay ku haboonaato isaga, WUXUU GARAN YAHAY waxa uu u baahan yahay in la sameeyo, quruxna u fudud in la tababaro, laakiin sidoo kale isagu waa madax adag yahay. Wuxuu ku saabsanaa 100% guri wadaag qiyaastii 15 toddobaad! Wuxuu aad u jecel yahay inuu ka farxiyo!
“Toby runti waa wiil aan caadi aheyn oo muuqaal ah, maadaama uu leeyahay weji dheer oo Husky ah, iyo Shar Pei ayaa dhisaya, iyo midabaynta birta. Ma lihin caruur yaryar, waxaan haysannaa dhalinyaro, wuuna jecelyahay iyaga! Wuxuu jecel yahay koolkoolinta wuxuuna jecel yahay waqtiga nasashada! Ma uusan la joogin wax caruur ah oo yar, laakiin waxaa u yimid eeyo kale oo si fiican ayuu qabtay. ”
'Ozzy waa Sharberian Husky diiwaangashan oo lagu muujiyay halkan markay jirto 6 bilood, culeyskiisuna yahay 40 rodol. Wuxuu leeyahay shakhsiyad aad u jecel oo macaan. Baahiyaha Ozzy jimicsi badan oo wuxuu jecel yahay inuu banaanka ku soo ordo isagoo u ordaya sida bisad ku ciyaareysa alaabta ay ku ciyaaraan oo wax ku soo ciyaaraan. Wuxuu jecel yahay cunista miraha iyo khudaarta sida dabacasaha, tufaaxa, buluugga iyo baradhada ceyriinka ah (wali ma helin wax uusan cuni doonin!) Ozzy asal ahaan wuxuu ahaa dheriga loo tababaray markaan guriga keenay. Kaliya shilal yar, canaan yar, oo weligiisba wuu fiicnaa. Isagu waa nin caqli badan, wuxuuna horey u bartay fadhiisiga, jiifsiga iyo imaatinka (daweynta). Isagu waa aad u madax adag , laakiin wuu sii fiicnaanayaa markii uu sii weynaado. '
Ozzy the Sharberian Husky (Chinese Shar-Pei / Siberian Husky mix mix dog) oo ah eey yar oo qiyaastii ah 2-3 bilood jir
bulldog american vs american bully
dawaco Terrier cross Jack russell
nus dahab ah retriever badh poodle
sawirada eeyaha yaryar ee isish setter
sax buluug isku darka poodle hound
kala badh feedh badh american bulldog